အောက်စီဂျင်အိုးကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
USD 1,626 1,643
EUR 1,885 1,915
SGD 1,140 1,170
USD 1,607 1,622
EUR 1,815 1,833
SGD 1,153 1,164
Home Business Categories Deals Community Job Boards Advertise With Us About Us Our Guides
Home Business Categories Deals Community Job Boards Advertise With Us About Us Our Guides Yangon News Sign In Download the app
အောက်စီဂျင်အိုးကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ?
အောက်စီဂျင်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ အဆုတ်ရောဂါ သို့မဟုတ် အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေရှိနေပါက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လေကို လုံလောက်စွာရဖို့ ခက်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်ရှူကြပ်လာပါက သင့်ရဲ့ နှလုံး၊ ဦးနှောက်နဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ပြဿနာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ လေကောင်းကောင်းမရတဲ့အခါ အောက်စီဂျင်အကူအညီနဲ့ အသက်ရှူလုပ်ငန်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အခုလို Covid-19 ရောဂါပျံ့ပွားလာချိန်မှာ ရောဂါကူးစက်တဲ့ သူတွေအတွက် အောက်စီဂျင်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ Covid ပိုးက အဆုတ်ကို အဓိက ဒုက္ခပေးတာဖြစ်လို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ခုခံအားနည်းတဲ့ သူတွေအတွက် အောက်စီဂျင်က မဖြစ်မနေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ တချို့က Quarantine Center ကို မသွားချင်ကြလို့ Home Quarantine နေကြပါတယ်။ Home Quarantine ဆိုပေမယ့်လည်း လူနာအနေနဲ့ အောက်စီဂျင်က လိုအပ်ပါတယ်။
ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာဆိုရင် အောက်စီဂျင်အိုးကစိတ်ချရပေမယ့် လူနေအိမ်မှာဆိုရင်တော့ အောက်စီဂျင်ဘူးအတွက် အထားအသိုက ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကို ဝယ်ယူပြီး အိမ်မှာဆောင်ထားကြမယ်ဆိုရင် အောက်စီဂျင်အိုးကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
(1) အောက်စီဂျင်အိုးနားမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရပါဘူး။ အောက်ဆီဂျင်ဟာ ကိုယ်တိုင်မီးမလောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မီးလောင်ခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးဖိုဘေး၊ မီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နေရာတွေနဲ့ ဝေးဝေးထားပေးရပါမယ်။
(2) ပူစေတဲ့အရာတွေနဲ့ အနည်းဆုံး (၅) ပေအကွာမှာ ထားရပါမယ်။ ပူစေတဲ့အရာတွေထဲမှာ ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊ ဖယောင်းတိုင်၊ မီးထွန်းရန်မီးနဲ့ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက် စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မီးပျက်လို့ဆိုပြီး အောက်စီဂျင်အိုးပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတာမျိုး လုံးဝ လုံးဝမလုပ်ရပါဘူး။
(3) လေဖြည့်ထားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်အိုးဟာ အတွင်းထဲမှာ လေပေါင် Pressure 1800 psi ရှိတာမို့ လေရှိနေတဲ့အိုးတွေကို ထုရိုက်ခြင်း၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပစ်ချခြင်းမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အောက်ဆီဂျင်အိုးကို လဲကျခြင်းမဖြစ်အောင် ခိုင်မာတဲ့ တစ်ခုခုမှာ ချည်နှောင်ထားရပါမယ်။
(4) အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေဟာ ဆီမှန်သမျှကြောက်ပါတယ်။ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ စားဆီ၊ ခေါင်းလိမ်းဆီ စသည်များနှင့် လုံးဝမထိမိအောင်ထားစေချင်ပါတယ်။ လှည့်တဲ့ ဝှီးဘားလေးကြပ်နေလို့ ဆီလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ လုံးဝလုံးဝ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ filling လုပ်တဲ့အချိန်ပေါက်ကွဲစေတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အိမ်မှာ အောက်စီဂျင်အိုးရှိပါက ပေါ့ပေါ့ပျက်ပျက် မနေဘဲ သတိကြီးကြီးနဲ့ ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ အောက်ဆီဂျင်အိုးရနိုင်မယ့်​ နေရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားလမ်း လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း (ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်) - 09786012786
ပေးဆပ်ခြင်း ပရဟိတအသင်း (ပုဇွန်​တောင်မြို့နယ်) - 09421139525၊ 09263876640၊ 09263876644
စေတနာ လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း၊ အမှတ်(၃/၄)ရပ်ကွက် (ပုဇွန်​တောင်မြို့နယ်) - 09254839779၊ 09253381448၊ 092500800100၊ 09440470636၊ 09793622114၊ 095184798
ငြိမ်းချမ်းခြင်းလက်များ ပရဟိတအသင်း၊ အ​နော်မာရပ်ကွက် (သာ​ကေတမြို့နယ်) - 09421004119၊ 095077446၊ 09420259094
နွယ်​အေး ဗလီ (ဒေါပုံမြို့နယ်) - 09976544981၊ 09250011562၊ 095500787
ဖို့​မြေရပ်ကွက် လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း၊ အမှတ်(၉၈/၁၀၀)၊ ၁၀၁လမ်း (မင်္ဂလာ​တောင်ညွန့်မြို့နယ်) - 01290782၊ 095047868၊ 0940044545၊ 09443219152
သ​ပြေကုန်းရပ်ကွက် လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း၊ အမှတ်(၃၅ ဘီ) ၁၂၅လမ်း (မင်္ဂလာ​တောင်ညွန့်မြို့နယ်) - 09424777120၊ 09424777150၊ 09424777160၊ 09424777180
ချမ်း​မြေ့ဆည်းဆာ လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း (မရမ်းကုန်းမြို့နယ်) - 09254191610၊ 09761965504
လှည်းတန်း လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း (ကမာရွတ်မြို့နယ်) - 09403789779၊ 09788526300
အ​မေ - အောက်ဆီဂျင် ကုသိုလ်ဖြစ်၊ အမှတ် ၂၁၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ ၈ရပ်ကွက် (ကမာရွတ်မြို့နယ်) - 095122487
ရောင်စဥ်မဲ့ လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း (ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်) - 09259967778၊ 09799639331
အေးချမ်း​မေတ္တာ လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း (အင်းစိန်မြို့နယ်) - 09751072309
Naing Family - အ​ရောင်း/အငှား၊ အမှတ်(၂၈၈)၊ ကုန်သည်လမ်း (ဗိုလ်တ​ထောင်မြို့နယ်) - 09952218898
Naing Family - အ​ရောင်း/အငှား၊ အမှတ် ၁၉/၂၀၊ ပုဇွန်​တောင်စက်မှုဇုံလမ်း (တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်) - 09443043094၊ 09443196913
အောင်မြန်မာ - အ​ရောင်း၊ ဟံသာဝတီပျိုးဥယျာဥ်ဝန်း၊ ကျွန်း​တောလမ်းမ (ကမာရွတ်မြို့နယ်) - 0973009532၊ 098612738၊ 09266027185၊ 0973011903
Unity Oxygen - အ​ရောင်း၊ အမှတ် ၂၈၆၊ စက်မှုလမ်းသွယ်၊ (၆)လမ်း၊ ဇုံ (၁)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။